Disney ကာတှနျးကားလေးတှကေပေးတဲ့ ဘဝအတှေးစာစုလေးမြား
(1) Always let your conscience be your guide.”( Pinocchio )
ဒီစကားလေးက ပီနိုခြီယိုဇာတျကားလေးထဲမှာ သဈသားရုပျလေးကို အသကျလာသှငျးပေးတဲ့နတျသမီးလေးက ပွောခဲ့တာပါ။ “မငျးရဲ့ဟီရိ သွတ်တပ်ပစိတျကပဲ အမွဲတမျးလမျးပွဖွဈပါစေ” ဆိုတဲ့စကားလေးက တကယျ့ကိုတနျဖိုးရှိတဲ့စကားလေးတဈခှနျးဖွဈပါတယျ။
(2) “Just keep swimming.”( Nemo )
ဒီစကားလေးကတော့ ငါးကလေးနီမို ကားထဲက ငါးအပွာလေးဖွဈတဲ့ ဒိုရီပွောခဲ့တဲ့စကားလေးပါ။ ဒိုရီလေးက တကယျ့ကိုအကောငျးမွငျစိတျနဲ့ပဲ ရှငျသနျတဲ့ဇာတျကောငျမြိုးပေါ့နျော။ သူ့မှာသူမလိုခငျြတဲ့အပိုငျးတှအေမြားကွီးရှိပမေယျ့ အဲ့အရာတှကွေောငျ့ ဘယျတော့မှစိတျအနှောငျ့အယှကျဖွဈမခံဘဲ အဲ့အစား သူကသူ့ရဲ့အနာဂတျကိုပဲသူရှေးရှုပွီးသူလုပျနိုငျတဲ့အလုပျဖွဈတဲ့ရကေူးခွငျးကိုပဲ အကောငျးဆုံးကွိုးစားပါမယျ ဆိုတဲ့အဓိပ်ပာယျပါ။ တဈခါတဈလေ ကြှနျတျောတို့ လောကကွီးမှာ ဒီလိုအတှေးနဲ့ရှငျသနျဖို့လညျးလိုအပျပါတယျ။
(3) “The flower that blooms in adversity is the most rare and beautiful of all.”( Mulan )
ဒီစကားလေးရဲ့အဓိပ်ပာယျကတော့ “အခကျအခဲတှကွေားကပှငျ့ရတဲ့ပနျးလေးက တနျဖိုးအရှိဆုံးနဲ့အလှဆုံးပါပဲ။” တဲ့။ ဒီစကားလေးက တရုတျအငျပါယာဘုရငျကွီးက စဈသူကွီးလီရှနျးကို ပွောခဲ့တဲ့စကားပါ။ ဘဝမှာ ကြှနျတျောတို့မလိုခငျြတဲ့အခကျအခဲတှရှေိပမေယျ့ ဒီအခကျအခဲတှကွေောငျ့ပဲ ကြှနျတျောတို့ပိုတောကျပနိုငျရမှာဖွဈပါတယျ။
(4) “Oh yes, the past can hurt. But the way I see it, you can either run from it or learn from it.”( The Lion King )
ဆမျဘာလေးကို သူ့ရဲ့ငယျဆရာမြောကျအိုကွီးက ပွောခဲ့တဲ့စကားပါ။ “ဟုတျတယျ။ အတိတျတှကေနာကငျြစတေယျ။ ဒါပမေယျ့ငါသိတဲ့နညျးကတော့ မငျးအဲ့အတိတျထဲကလှတျမွောကျဖို့ကွိုးစားရငျကွိုးစား မဟုတျရငျ အတိတျကနသေငျယူဖို့ကွိုးစားပါ။” တဲ့။
(5) “Ohana means family, family means nobody gets left behind.”( Lilo and Stitch )
ဒီစကားလေးကတော့ မိသားစုဆိုတဲ့အဓိပ်ပာယျကို ပိုလေးနကျစတေဲ့ ဒဈစနေးကပေးတဲ့စကားလကျဆောငျလေးပါ။ စတဈချြလေးဝမျးနညျးနတေဲ့အခြိနျမှာ လီလိုနဲ့သူ့အဈမက နှဈသိမျ့ပေးခဲ့တဲ့စကားလေးပေါ့။ “အိုဟာနာ ဆိုတာ မိသားစုလို့ပွောတာ။ မိသားစုဆိုတာ ဘယျသူ့ကိုမှမထားခဲ့ဘူး ဆိုတဲ့အဓိပ်ပာယျပဲ။”
(6) “Our fate lives within us, you only have to be brave enough to see it.”( Brave )
Brave ဇာတျကားထဲမှာ မငျးသမီးလေး မယျရီဒါပွောခဲ့တဲ့စကားလေးပေါ့။ “ငါတို့မှာ အကွောကျတရားတှဆေိုတာရှိတာပဲ။ ဒါပမေယျ့ မငျးအဲ့တာကို မွငျအောငျကွညျ့ရဲဖို့ပဲလိုတယျ။” တဲ့။ ဘယျလောကျတောငျ အားတကျဖို့ကောငျးတဲ့စကားလေးလဲနျော။
(7) “Success doesn’t come for free. You have to do whatever it takes to seize your moment.”( Coco )
Coco ဇာတျကားထဲမှာ အာနတျစတို ပွောခဲ့တဲ့စကားလေးပါ။ သူက သူ့စကားကို အလှနျအကွူးမှနျကနျအောငျဆောငျရှကျခဲ့တဲ့အတှကျ လူသတျသမားလူဆိုးဖွဈခဲ့ရတာပါ။ ဒါပမေယျ့ ကောငျးတဲ့ဘကျကကွညျ့မယျဆို သူက သူ့အိပျမကျကို အရယူရဲခဲ့တဲ့လူလို့ ဆိုလို့ရပါတယျ။ ဒီစာသားလေးရဲ့ အဓိပ်ပာယျက “အောငျမွငျမှုဆိုတာအလကားမရဘူး။ မငျးဆီခဏနဲ့ပဲရောကျလာတဲ့ အခှငျ့အရေးကို မငျးသခြောဆုပျကိုငျနိုငျရမယျ။” ပဲဖွဈပါတယျ။
(8) “The only way to get what you want in this world is through hard work.”
Disney Princesses တိုငျးက မိုးကရြှကေိုယျတှမေဟုတျပါဘူး။ ဟိုးအောကျခွဘေဝကနေ အလုပျကွိုးစားပွီးအိပျမကျကိုအကောငျအထညျဖျောခဲ့တဲ့ မငျးသမီးတဈပါးရှိပါတယျ။ သူကတော့ ဖားမငျးသမီးလေးပါ။ သူ့ကိုယျသူအားပေးတဲ့စကားလေးကတော့ “ဒီလောကကွီးမှာ နငျဖွဈခငျြတာကို ဖွဈအောငျလုပျနိုငျတဲ့နညျးက ကွိုးစားခွငျးပဲရှိတယျ။”ဆိုတဲ့စကားလေးပါ။
ဒီ Disney Quotes လေးတှကေ စာဖတျပရိသတျကွီးကို အားအငျတှပေေးနိုငျလိမျ့မယျလို့ မြှျောလငျ့ပါတယျ။ အငျအားရှိရှိနဲ့ ဘဝနရေ့ကျတှကေို အကောငျးဆုံးဖွတျကြျောကွမယျနျော။
Disney ကာတွန်းကားလေးတွေကပေးတဲ့ ဘဝအတွေးစာစုလေးများ
ဒီစကားလေးက ပီနိုချီယိုဇာတ်ကားလေးထဲမှာ သစ်သားရုပ်လေးကို အသက်လာသွင်းပေးတဲ့နတ်သမီးလေးက ပြောခဲ့တာပါ။ “မင်းရဲ့ဟီရိ သြတ္တပ္ပစိတ်ကပဲ အမြဲတမ်းလမ်းပြဖြစ်ပါစေ” ဆိုတဲ့စကားလေးက တကယ့်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့စကားလေးတစ်ခွန်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီစကားလေးကတော့ ငါးကလေးနီမို ကားထဲက ငါးအပြာလေးဖြစ်တဲ့ ဒိုရီပြောခဲ့တဲ့စကားလေးပါ။ ဒိုရီလေးက တကယ့်ကိုအကောင်းမြင်စိတ်နဲ့ပဲ ရှင်သန်တဲ့ဇာတ်ကောင်မျိုးပေါ့နော်။ သူ့မှာသူမလိုချင်တဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးရှိပေမယ့် အဲ့အရာတွေကြောင့် ဘယ်တော့မှစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်မခံဘဲ အဲ့အစား သူကသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုပဲသူရှေးရှုပြီးသူလုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့ရေကူးခြင်းကိုပဲ အကောင်းဆုံးကြိုးစားပါမယ် ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ။ တစ်ခါတစ်လေ ကျွန်တော်တို့ လောကကြီးမှာ ဒီလိုအတွေးနဲ့ရှင်သန်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။
ဒီစကားလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ “အခက်အခဲတွေကြားကပွင့်ရတဲ့ပန်းလေးက တန်ဖိုးအရှိဆုံးနဲ့အလှဆုံးပါပဲ။” တဲ့။ ဒီစကားလေးက တရုတ်အင်ပါယာဘုရင်ကြီးက စစ်သူကြီးလီရှန်းကို ပြောခဲ့တဲ့စကားပါ။ ဘဝမှာ ကျွန်တော်တို့မလိုချင်တဲ့အခက်အခဲတွေရှိပေမယ့် ဒီအခက်အခဲတွေကြောင့်ပဲ ကျွန်တော်တို့ပိုတောက်ပနိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဆမ်ဘာလေးကို သူ့ရဲ့ငယ်ဆရာမျောက်အိုကြီးက ပြောခဲ့တဲ့စကားပါ။ “ဟုတ်တယ်။ အတိတ်တွေကနာကျင်စေတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါသိတဲ့နည်းကတော့ မင်းအဲ့အတိတ်ထဲကလွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးစားရင်ကြိုးစား မဟုတ်ရင် အတိတ်ကနေသင်ယူဖို့ကြိုးစားပါ။” တဲ့။
ဒီစကားလေးကတော့ မိသားစုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို ပိုလေးနက်စေတဲ့ ဒစ်စနေးကပေးတဲ့စကားလက်ဆောင်လေးပါ။ စတစ်ခ်ျလေးဝမ်းနည်းနေတဲ့အချိန်မှာ လီလိုနဲ့သူ့အစ်မက နှစ်သိမ့်ပေးခဲ့တဲ့စကားလေးပေါ့။ “အိုဟာနာ ဆိုတာ မိသားစုလို့ပြောတာ။ မိသားစုဆိုတာ ဘယ်သူ့ကိုမှမထားခဲ့ဘူး ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲ။”
Brave ဇာတ်ကားထဲမှာ မင်းသမီးလေး မယ်ရီဒါပြောခဲ့တဲ့စကားလေးပေါ့။ “ငါတို့မှာ အကြောက်တရားတွေဆိုတာရှိတာပဲ။ ဒါပေမယ့် မင်းအဲ့တာကို မြင်အောင်ကြည့်ရဲဖို့ပဲလိုတယ်။” တဲ့။ ဘယ်လောက်တောင် အားတက်ဖို့ကောင်းတဲ့စကားလေးလဲနော်။
Coco ဇာတ်ကားထဲမှာ အာနတ်စတို ပြောခဲ့တဲ့စကားလေးပါ။ သူက သူ့စကားကို အလွန်အကြူးမှန်ကန်အောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွက် လူသတ်သမားလူဆိုးဖြစ်ခဲ့ရတာပါ။ ဒါပေမယ့် ကောင်းတဲ့ဘက်ကကြည့်မယ်ဆို သူက သူ့အိပ်မက်ကို အရယူရဲခဲ့တဲ့လူလို့ ဆိုလို့ရပါတယ်။ ဒီစာသားလေးရဲ့ အဓိပ္ပာယ်က “အောင်မြင်မှုဆိုတာအလကားမရဘူး။ မင်းဆီခဏနဲ့ပဲရောက်လာတဲ့ အခွင့်အရေးကို မင်းသေချာဆုပ်ကိုင်နိုင်ရမယ်။” ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Disney Princesses တိုင်းက မိုးကျရွှေကိုယ်တွေမဟုတ်ပါဘူး။ ဟိုးအောက်ခြေဘဝကနေ အလုပ်ကြိုးစားပြီးအိပ်မက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့တဲ့ မင်းသမီးတစ်ပါးရှိပါတယ်။ သူကတော့ ဖားမင်းသမီးလေးပါ။ သူ့ကိုယ်သူအားပေးတဲ့စကားလေးကတော့ “ဒီလောကကြီးမှာ နင်ဖြစ်ချင်တာကို ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့နည်းက ကြိုးစားခြင်းပဲရှိတယ်။”ဆိုတဲ့စကားလေးပါ။
ဒီ Disney Quotes လေးတွေက စာဖတ်ပရိသတ်ကြီးကို အားအင်တွေပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ အင်အားရှိရှိနဲ့ ဘဝနေ့ရက်တွေကို အကောင်းဆုံးဖြတ်ကျော်ကြမယ်နော်။